Vimeo waa goob video qaybsiga weyn on kuwaas oo isticmaala gali kartaa, share iyo u arkaan videos. Waxaa qoreysa SD iyo 720p HD loo maqli karo oo bixiya users 500MB kaydinta lacag la'aan ah toddobaad kasta. Si loo kordhiyo meel aad kaydinta iyo in la hubiyo in aad videos si habsami ciyaaro, waxaa laga yaabaa in aad u baahan tahay in cadaadin videos ka hor uploading in vimeo. Halkan, si buuxda u saftay qaylqaylin Wondershare Video Converter kaa caawin kartaa inaad si fudud u cadaadin videos for koombiyuutarka vimeo. Hadda sii akhriska tallaabo-tallaabo tilmaamaha ku riixo video for vimeo.
1 Xamuulka videos aad u baahan tahay in cadaadin
Ka dib markii ay ku rakibidda iyo ordaya video Converter this, click Add Faylal ay si toos ah ama jiidi-n-daadiyaa oo dhan videos u baahan compressing in uu furmo suuqa hoose. Waxaad ka heli doontaa in dhammaan videos laga keeno la soo bandhigi doonaa sida thumbnails in saxaarad shayga. Waxaad diyaarsan kartaa amarka ama la bedelo magacyada faylasha haddii loo baahdo.
2 beddel saldhigyo videos ah
Si aad u cadaadin videos for vimeo, guji Settings ee geeska midig hoose. Daaqadda pop up ka, aad gacanta qabsato karaan noocyada kala duwan ee goobaha. Vimeo aqbalay video codecs ugu waaweyn ee, laakiin natiijada ugu fiican inaad si fiican u dooran lahaa H.264. Waxa ay taageertaa videos iyadoo heerarka jir joogta ah 24, 25, ama 30 (ama 29.97) loox kasta labaad. Haddii aad videos ayaa toogtay loox sare, waa in aad iyaga encode qeybtii heerka jir asalka ah. Markaas waxaad u baahan doontaa in la xadido heerka qayb ka mid ah videos in ay 2,000-5,000 kbps u SD iyo 5,000-10,000 kbps u 720p HD video.
Talo: Haddii aad rabto in aad geliyaan HD buuxa ama 1920 x 1080 videos, waxaad u baahan tahay in la gaarsiiyo account vimeo ah. Vimeo bixisaa laba casriyaynta kala duwan - Plus iyo PRO - in ciyaari fursadaha sare u bandhigaya aad videos ee ugu fiican.
The Wondershare Video Converter sidoo kale aad u saamaxaaya in ay qabsadaan goobaha of audio. Heerka xogta waa in la koobnayn 320 kbps iyo heerka muunad waa in ay ahaataa 48 kHz. Haddii mashruuca audio ka yar tahay 48 kHz, kaliya waxaa ka tago heerka muunad hadda.
Ka dib markii la qabsado saldhig oo aad videos, riix OK iyo aad u soo laaban doonaa si uu furmo suuqa hoose. Halkan waxaad riixi kartaa icon Play in ay ku eegaan natiijada wax soo saarka.
3 dhoofinta Tifaftirayaasha videos iyo iyaga geliyaan si ay u vimeo
Haddii aad tahay qof ku qanacsanayn natiijada, Hit Beddelaan si aad u bilowdo habka riixo isla markiiba. Barnaamijkan wuxuu taageeraa compressing badan videos isku mar Dufcaddii oo badbaadiyay aad mar. Markii diinta ka dhameystiray, waxaad riixi kartaa Open Folder si toos ah ay helaan files Tifaftirayaasha.
> Resource > Video > Sidee ku cadaadisaa Video for vimeo